Ikike Cloudgwé ojii: Nwepu ikike nhichapụ ọdịnaya n'ime ezigbo oge | Martech Zone
Ikike igwe ojii: Nwepu ikike nhichapụ ọdịnaya na ozugbo
Na mbido afọ a, ebubo na Chipotle sere foto nke onye na-elekọta Sacramento na-enweghị ikike ha wee kesaa ya na nzụkọ ahịa ha. Na na-echere uwe bụ maka uru niile ụlọ ọrụ na-enweta n'ime afọ 9 billion $ 2.2.
Ọ bụ ọnọdụ a gaara ezere site na iji teknụzụ nke webatara usoro iji hụ na a tọhapụrụ aka na foto ahụ maka ojiji na nkesa… tupu ekesaa ya!
FADEL na-ewebata onyinye ọhụrụ maka ụdị na ụlọ ọrụ iji soro ikike ikike ọdịnaya dijitalụ ha na-eji wee mepụta mgbasa ozi na ahịa. Uru dị iche iche gụnyere ịnweta ngwa ahịa mgbasa ozi dijitalụ ngwa ngwa iji ihe okike kee ihe, ịchekwa oge na ego na usoro nnabata ikike yana izere ọnụ ahịa nke iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi.
Ikike igwe ojii ezubere iji tinye n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu njikwa ihe onwunwe dijitalụ na usoro mgbasa ozi ejiri na nnukwu na obere sized ụlọ ọrụ na ụdị, gụnyere Abode, Mepee OpenText, Box na Adstream.
Ndị njikwa akara na-enweta ngwa ngwa na profaịlụ profaịlụ gụnyere mmekọrịta ndị ọrụ ha, ọrụ, njirimara na njirimara metụtara yana nkwekọrịta, ntọhapụ, na usoro ojiji. Ndị okike nwere ike ịlele ngwa ngwa nke ngwa ahịa mgbasa ozi - site n'ụdị, ndị na-eme ihe nkiri na ndị na - ese foto na egwu, onyonyo, na mgbasa ozi n'onwe ha - megide usoro nkwekọrịta iji kpochapụ ikike n'oge, niile n'ime usoro njikwa ọdịnaya ha dị ugbu a.
Anyị na-ewetara ihe niile anyị mụtara site na ahụmịhe anyị na afọ iri na anọ na njikwa ikike na teknụzụ na obodo mgbasa ozi Ikike igwe ojii. Enwere ike itinye ya ngwa ngwa na ngwa ngwa na azụmaahịa azụmaahịa na sistemụ mgbasa ozi dị ugbu a iji belata ọnụahịa, bulie itinye ego na ọsọ ọsọ gaa n'ahịa ma belata ọtụtụ ihe egwu nwere ike ibute site n'iji ọtụtụ akụ na ihe arụ ọrụ eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma. Onye isi oche.
Mgbasa mgbasa ozi na-adabere na nchịkọta sara mbara nke akụ dijitalụ iji kwurịta ihe bụ isi nke ika ahụ. N'agbanyeghi n'ime gburugburu juputara na ọdịnaya, ọtụtụ nsogbu nwere ike ibelata mkpọsa ma bute nsogbu maka azụmaahịa ahụ. Ikike Cloud site na FADEL bụ azịza dị mfe ma na-enweghị nke na-enyere ndị mgbasa ozi aka:
Mee ngwangwa mmepụta na nkesa site na iji nlezianya hụ nke akụ - mbipụta, dijitalụ, vidiyo na talent nwere ike iji rụọ ọrụ oge, ebe na etu
Chebe ụdị site na iji ọdịnaya anaghị akwado ya nke nwere ike iri nde mmadụ na ntaramahụhụ, ịmegharị mkpọsa na PR na-adịghị mma.
Bee ego site na ijiwanye arụmọrụ na ikike iji nyochaa ihe okike niile maka ijikwa ọdịnaya zuru oke.
Galvanize ika nhatanha na arụmọrụ nchịkọta nke na-enye nghọta n'ime ọchụchọ na ojiji ọdịnaya ka ị nwee ike ịkọba ya gafee mbipụta, dijitalụ, mgbasa ozi na ọwa mmekọrịta.
Tags: AbodeAdstreamBoxnjikwa ihe onwunwe dijitalụnjikwa ikike dijitalụfadelnjikwa ego mgbasa oziMepee OpenTextikike ojii